प्रधानमन्त्री ओली किन गर्छन् ‘उडन्ते’ तर्क? – Health Post Nepal
२०७७ असार ५ गते १३:१०
प्रधानमन्त्री केपी ओली जुनसुकै विषयवस्तुलाई ‘ठट्टा’ र ‘टुक्का’सँग जोडेर व्यक्त गर्न पहिलेदेखि सिपालु छन्। उनको ‘ठट्टा’ गर्ने बानी पुरानै हो।
कोरोना महामारीका बखत हिजोआज ओली झनै ‘उट्पट्याङ’ गर्न थालेका छन्।
संघीय संसद बैठकमा केही समयअघि सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए- नेपालीको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी छ भनेर कसले कसले भन्यो?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बोल्ने पालो आउँदा थापालाई जवाफ फर्काए, ‘एक सांसदले नेपालीको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो भनेर सोध्नुभयो। भर्खरै मैले भने नि मैले भनेको हो भनेर।’
ओलीले जवाफ फर्काउँदा संसदमा हासोको फोहरा छुट्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी भएकाले कोरोनाका कारण ठूलो क्षति नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि थापाले संसदमा सो कुराको वैज्ञानिक आधार सोध्न खोजेका थिए।
तर, ओलीले आफू नै विशेषज्ञ चिकित्सक हो जस्तै गरी ‘मैले हो’ भनिदिए। सरकारको विरोध गर्न सडकमा निस्किएकाहरूले ‘नो पिसिआर, बेसार-अदुवा कोरोनाको उपचार: डा. केपी ओली’ लेखेको प्लेकार्ड बोकिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार संघीय संसदमा बोल्दै कोरोना भाइरससँग जुध्नबारे आफूले व्यक्त गरेका धारणालाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गरिएको गुनासो गरे। उनले कोरोना लाग्यो भने ‘बेसार र तातोपानी खाएर हाच्छ्यूँ हाच्छ्यू गर्नुस्, पचाइदिनुस्’ सम्म भने।
उनको बेसार ‘महात्म्य’लाई उडाएर टिप्पणीहरू फेरि बेजोड बनेका छन्।
पहिलो, उनमा आफू ‘सर्वज्ञाता’ रहेको भ्रम छ। दोस्रो, उनी परिणाम नसोची बोल्छन्। यी दुबैलाई ‘अहंकारी सोच’को संज्ञा दिइने गरिएको छ।
ओलीले बेसार, अदुवा खाए कोरोना उपचारमा फाइदा पुग्ने तर्क गर्दा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उडाइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई त्यसरी उडाइएको कुरालाई सामान्य ठाने।
ओलीले पुन: ‘बेसार महात्म्य’लाई निरन्तरता दिएपछि त्यो झन् ‘भद्दा मजाक’ लाग्याे। आलोचकहरूले उनको ‘मजाक’माथि खरो टिप्पणी गर्छन्, प्रशंसकहरू हाँसेर पचाउँछन्।
देशको कार्यकारी प्रमुखले चिकित्सा विज्ञानलाई नै ‘उडाउन’ खोजेको भनी डाक्टरहरूले सामाजिक सञ्चालमा टिप्पणी गरेका छन्।
ओलीले गर्भवती महिलाले बेसार खान नहुने बताएका थिए। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भवती महिलाले बेसार खाँदा केही नहुने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्।
ओलीले जन्डिस रोगबाट पीडितले बेसार खान नहुने बताएका थिए। जन्डिस रोगसम्बन्धी विशेष ज्ञान भएका डाक्टर सुधांशु केसीले भनेका छन्, ‘बेसार खाएर जण्डिस हुने भए, बढ्ने भए जिन्दगीभरि हरियो घाँस खाने भैंसी कालो नभएर हरियो हुन्थ्यो होला!’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना जनतालाई दिन हुन्न भनी सुझाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘कुन किताबमा लेखेको छ, जण्डिसमा बेसार खान हुन्न भनेर?’
ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनमा दुई थरी अहंकार छन्, जुन उनले पहिलेदेखि नै पालिरहेका छन्।
पुराना कम्युनिस्ट नेता, ओलीका समकालीन तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, ‘सामान्य भाषामा भन्दा ओलीमा बढी गफ लगाउने प्रवृत्ति छ।’
मैनालीका अनुसार उनी पहिलेदेखि ‘गफ लगाउने’ स्वभावका थिए, जतिबेला उनी राज्यको उच्च भूमिकामा थिएनन्। समयक्रममा उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको गफ दिने स्वभाव हराएन।
‘उहाँले म कुन पोजिसनमा छु, मैले बोलेको कुराले के परिणाम आउँछ भनेर सोच्नुहुन्न, जिम्मेवारी बदलिँदा स्वाभाव परिवर्तन हुनुपर्ने हो,’ मैनालीले भने।
कतिपय सन्दर्भमा त राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र बहसमा पनि प्रधानमन्त्रीका हलुवा अभिव्यक्ति आउने गरेको मैनालीले बताए।
गत जेठ महिनामा संसदमै नेपाल-भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते?’
‘राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ताका विषयमा संसदमा उखान गर्ने कुरा हैन,’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।’
‘सांसदहरू, हास्यचेत र मुर्खता फरक कुरा हुन्। पत्र-पत्र गरेर नेपालका संस्थाहरू पत्रु हुँदैछन्। इम्युनिटी र बेसार पानीबारे संसदमा त्यति लामो प्रवचन भइराख्दा तपाईंको मनमा आएन कि सिटबाट उठेर भनौं- ‘प्रमज्यू ,यो न मजाकको विषय हो, न मजाकको थलो हो।’
जानकारहरू पनि प्रधानमन्त्रीको ठट्टा गर्ने बानीबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेको स्वीकार्छन्। तर, मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस्ता हास्यास्पद कुरा गर्दा आलोचकले उडाउने ‘मसला’ भेटिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनेर समाचार बनाउँदा सोच्नुपर्ने बेला आएको पत्रकारिता क्षेत्रबाट सुझाव आएको छ। प्रधानमन्त्रीका ठट्टालाई आधार बनाएर समाचार बनाउँदा ‘फेक न्यूज’ पनि हुने वरिष्ठ पत्रकारहरूको धारणा छ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भाषणलाई समाचार बनाउँदा फेक न्यूज पनि हुन सक्छ। सत्य-तथ्य सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएका पत्रकारिता माध्यमहरूका सम्पादकहरू ध्यान दिनुहोला।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई उखानसँग जोडेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘गाउँघरतिर एउटा उखान छ, हलेदो भनेर चिनिसकेपछि कोट्याइरहन पर्दैन। तर, हामी चाहिँ किन पटक-पटक बेसार (सुकेको हलेदोको धुलो)का कुरा कोट्याइरहेका छौं? गल्ती हाम्रो हो कि हलेदो/बेसारको?’
वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले सांसदहरूलाई हास्यचेत र मुर्खता फरक कुरा हुन् भन्दै संसद मजागको थलो हो भनी किन प्रश्न नगरेको भनेका छन्।
तर, सकारात्मक-नकारात्मक जसरी टिप्पणी भए पनि ओलीले आफ्नो ‘ठट्टा’ र ‘टुक्का’ भने त्याग्न सकेको देखिँदैन।